Kedu ihe mgbochi maka ọdịda nke ndị na-emepụta mmanụ diesel?
Ọ bụrụ na enwere mgbochi nye enweghị cylinders na setị generator, ihe mbụ enweghị cylinder bụ ihe mgbochi nkịtị nke igwe generator. Ihe a na-elekwasị anya bụ na generator na-ejighị n'aka ma na-ama jijiji, ụda ahụ na-akwụsị, enweghị ike, na-adịghị ike, ọ dị mfe imenyụ, ikpochapu bụ nwa sm ...
Otu esi edozi ọdịda nke ihe ntanetị genset
Mgbe igwe na-ewepụta igwe nzacha ihe nwere nsogbu, buru ụzọ lelee ihe mgbochi nwere ike ịpụ na sistemụ kọmputa. Nke a nwere ike igbochi mgbochi mbụ ndị na-enweghị njikọ na kọmputa njikwa usoro, ma na usoro ihe mmetụta, kọmputa, actuators na akara. Mmejuputa ihe mmekorita ...
Kedu ọkwa ọkwa teknụzụ nke mmanụ dizel?
Ọkwa teknụzụ nke mmanụ diesel setịpụrụ nwere njikọ chiri anya na ọkwa ọkwa nke injin diesel. Zụ ahịa na nyocha nke ọrụ nke onye na-ewe mmanụ diesel setịkwara na-ahụ maka mmanụ dizel dị ka ọdịnaya dị oke egwu, n'ihi na iji nlekọta na ọrụ oge niile, nke ...
Enwere ọtụtụ ihe ị kwesịrị ịmara mgbe ị na-etinye igwe na-enye ọkụ maka ụlọ ọgwụ
Dị ka akụrụngwa ọkọnọ nke ụlọ ọgwụ, igwe na-enye ọkụ agaghị enwe ike dochie akụrụngwa ndị ọzọ. Xi'an Kunpeng Power Xiaobian si otú a gosipụta na ọrụ nke igwe nrụpụta Xi'an kwesịrị ka ebuli ya elu, ma wepu aha ngwaahịa ahụ n'onwe ya. Kwesịrị ịbụ v ...
Etu esi amata ọkwa asọmpi ahịa nke diesel generator
Gbaso otu ebe mmepe nke China dizel generator setịpụrụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na nkwalite ngwaahịa na ịzụ ahịa ahịa, ebe ọnọdụ asọmpi na ụlọ ọrụ enweghị ike ịtụle. Dị ka ndị na-eweta mmanụ diesel ise kacha elu na mba ahụ, asọmpi ahụ na ...